South Asia and Beyond: इबोलासित किन डराउने?
तर त्यस्ता भाइरसभन्दा विशुद्ध फरक अरु भाइरसहरु छन् जो छेपाराले रङ फेरे झैं आफ्नो परिचय जनाउने आणुवंशिक रुप फेर्छन् । बीस वर्ष लगाएर एउटा भ्याक्सिन बनायो भने बीस दिनमा भाइरसले अर्कै रुप ग्रहण गर्छ र भ्याक्सिनले काम गर्दैन । ब्याक्टेरियाहरुलाई एनिटबायोटिकले र भाइरसलाई भ्याक्सिनले नियन्त्रणमा राख्दै आएका वैज्ञानिकहरुका लागि यस्ता भाइरस ज्यादै ठूलो चुनौती बनेर खडा भएका छन् । भाइरस आविष्कार भएको तीन दशक कटिसक्दा पनि एचआइभी एड्सको प्रभावकारी भ्याक्सिन बन्न नसक्नुका कारणहरुमध्ये प्रमुख उक्त भाइरसको यही विशेषता हो ।
तर एचआइभी भन्दा पनि द्रुत गतिमा बदलिइरहन सक्ने बर्ड फ्लू गराउने इन्फ्लुएन्जा भाइरसले बदलिंदै जाँदा कुन क्षणमा मानिसबाट मानिसमा सर्ने क्षमता ग्रहण गर्छ, त्यो सम्भाव्यताको कुरा मात्र हो र अहिलेको गतिमा भाइरसलाई फैलिन दिइरहने हो भने निकट भविष्यमा नेपाल र भारतजस्ता शुन्य नियमन र न्यून चेतना भएका मानिस बस्ने भुभागहरुमा त्यस्तो प्रलय हुने सम्भावना टड्कारो छ ।
अब आयो डेंगु र इबोला भाइरसका कुरा । यी भाइरसचाहिं आफैं बदलिइरहनेभन्दा पनि यीविरुद्ध हाम्रो संक्रमण प्रतिरोधी क्षमता काम नलाग्नुले प्रमुख भुमिका खेलेको हुन्छ । खास गरी डेंगुमा अरु सामान्य भाइरसभन्दा उल्टो पहिले संक्रमण भएपछि पुनः संक्रमण हुँदा तीव्र रक्तस्राव हुने डेंगु हेमोरेजिक फिभर कसरी हुन्छ भन्ने सम्म वैज्ञानिकहरुले यकिन गर्न बाँकी नै छ ।
त्यसै गरी बाँदर र सँुगुरबाट मानवमा सरेको भनिएको इबोलाबारे अझै धेरै कुरा खुल्न बाँकी छ । खास गरी सिएरा लियोनको प्रभावित क्षेत्रम यो रोगको उपचार र शोध दुवैको नेतृत्व गरिरहेका संक्रमणजन्य रोग विशेषज्ञ डा. शेख उमार खान यही जुलाइको अन्तम इबोलाकै कारण मरेपछि त त्यस खालको शोध नै प्रभावित भएको छ र उक्त रोगबारे धेरै कुरा अझै अन्योलमा रहने देखिन्छ ।
शरीरमा पसिसकेपछि शरीरका विभिन्न प्रक्रियाबीच कायम सन्तुलन बिगारेर रक्तस्राव लगायतका लक्षण देखाउने इबोला भाइरस बाँदर वा सुँगुरसितको संसर्गबाट र मानव जातिभित्रै यौनजन्य क्रियाकलापबाट मुख्यतः सर्छ भन्ने मान्यता थियो केही अगाडिसम्म । तर अफ्रिकाको पछिल्लो अनुभवपछि भने थुक, आँशु, पसिना, वीर्य आदिबाट पनि सर्न सक्छ भनिएको छ जबकि यसरी सर्छ नै र यसरी सर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी हुने गरी अध्ययनहरु हुन पाएका छैनन् । त्यसै गरी यो भाइरस स्वासप्रश्वासबाट पनि सर्न सक्छ भनिएको छ ।
इबोलालगायत अरु डरलाग्दा संक्रमणहरुबाट बच्न सबै मानिसहरुले संगठित रुपमा खास उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले हालै अफ्रिकाबाट फर्किनेहरुका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ भन्ने समाचार आइरहेको छ । तर त्यतिले मात्र पुग्ने देखिंदैन ।
यस्ता रोग रोकथामको पहिलो उपाय के हो भने सम्बन्धित सबै पक्षहरु उचित रुपमा शिक्षित र सुसुचित हुनुपर्छ । बर्ड फ्लूमा जस्तो भेलजसरी एकचोटि रोकथामका उपाय अपनाउने अनि महिना दिनमा सबै बिर्सने गर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।
इबोलाको सन्दर्भमा दुई व्यक्तिबीच विभिन्न रुपमा हुने भौतिक सम्पर्क कम गर्नु, पटक पटक प्रभावकारी तरिकाले हात धुनु अनि गुम्सिएको साधनमा यात्रा नगर्नु न्यूनतम विधि हुन आउँछन् । खास गरी अस्पतालमा तथा डाक्टरहरुका लागिचाहिं हात मिलाउनको सट्टा नमस्ते गर्नु वा शिर निहुर्याउनु वा मुड्की बन्द गरेर हत्केलाको पछिल्लो भाग ठोक्याउनुले संक्रमणको फैलावट रोक्न प्रभावकारी भुमिका खेल्छ भनिएको छ । संक्रमण नेपाल भित्रिइहालेको खण्डमा बाध्यता नभएसम्म ठूलो जमघटमा नजानु, यात्रा गर्दा हावा खूला आवतजावत गर्ने बस वा निजी साधनमा यात्रा गर्नुजस्ता उपायहरु पनि अपनाउन पर्ने हुन सक्छ । त्यसबाहेक अनावश्यक रुपमा गाडीको सीसा, अस्पतालका वार्डका भित्ता आदि ठाउँमा नछुनु, छोइहालेमा तुरुन्त साबुनले हात धोएर स्प्रिटले हात पुछ्नु अनिवार्य हुन आउँछ । त्यसबाहेक घरमा वा छिमेकमा कोही यो रोगले मर्यो भने अत्यन्त सावधानीसाथ पञ्जा लगाएर मात्र लासलाई छुनु अनिवार्य हुन आउँछ किनकि लासबाट संक्रमण सरेका उदाहरणहरु अफ्रिकामा फेला परेका छन् ।
त्यसबाहेक जान्नैपर्ने कुरा के छ भने, इबोला मात्र एउटै खतरनाक भाइरस हैन । खास गरी नेपालमा त बर्ड फ्लू फैलाउन खेलिएको भुमिका जन स्वास्थ्यका लागि आत्मघातीसरह देखिन्छ । उसरी नै डेंगुको प्रभाव अझै फैलिने क्रममा छ ।
यी सबै जोखिमहरुबाट बच्न सरकारले एकीकृत र प्रभावकारी रुपमा आम मानिसलाई शिक्षित बनाउनु जरुरी छ । यीमध्ये कुनै पनि रोग महामारीको रुपमा फैलिएको अवस्थामा पूरा सावधानीका साथ तिनबाट बच्ने उपाय अँगाल्नेहरुसमेत रोगबाट अछुतो नरहने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले त्यस्तो संक्रमण सकभर नेपालमा आउनै नदिने र आइहालेको खण्डमा संगठित प्रयासद्वारा त्यसलाई फैलिन नदिने कोशिस गरिनुपर्छ ।
Posted by Jiwan Kshetry at 3:03 PM
Labels: Ebola virus, Health, Medicine, Nepal